Akụkọ - vingkpacha ndụmọdụ ụmụ nwanyị
Atụmatụ ịkpụ ntutu maka ụmụ nwanyị
Mgbe ịkpụ ntutu, underarms ma ọ bụ ebe bikini, ịmịcha mmiri kwesịrị ekwesị bụ ihe mbụ dị mkpa. Ya adịla mgbe ị ga-akpụ afụ ọnụ gị n’ebughị ụzọ kpụọ mmiri na ntutu, n’ihi na ntutu isi kpọrọ nkụ na-esi ike ibelata ma mebie ọnụ ọnụ mma ya. Ọkpụkpụ dị nkọ bụ ihe dị mkpa iji nweta ikpuchi dị mma, nkasi obi na-enweghị mgbakasị. Aguba nke na-akọ ọkọ ma ọ bụ na-adọka chọrọ agụba ọhụrụ ozugbo.
1.Moisten jiri mmiri mee ihe dị ka nkeji atọ, wee tinye gel na-akpụ isi. Mmiri mmiri na-awụ ntutu, na-eme ka ọ dị mfe ịkpụ, gel jel na-enyere aka ijigide mmiri ahụ.
2. Jiri ogologo oge, ọbụlagodi na-enweghị itinye nrụgide gabigara ókè. Kpachapụ anya kpụọ nku ọkpụkpụ, nkwonkwo ụkwụ, ikpere.
3.N'ihi ikpere, ehulata ntakịrị iji dọta akpụkpọ ahụ tupu ịkpụ afụ ọnụ, dịka akpụkpọ ahụ apịaji siri ike ịkpụ.
4.Nọdụ ọkụ iji gbochie ọgazị bumps, dị ka ihe ọ bụla na-adịghị mma na akpụkpọ elu nwere ike ime ka afụ ọnụ.
5.Ejiri eriri, dị ka nke Schick® ma ọ bụ Wilkinson Sword mere, nyere aka gbochie nlezianya na egbutu. Etinyela aka ike! Nanị ka agụba na njikwa rụọ ọrụ maka gị
6.Cheta ntutu n’eto ntutu isi. Wepụta oge ma kpachapụ anya na mpaghara dị nro. Maka ịkpụ ajị dị nso, jiri nlezianya kpụọ ọka nke ntutu.
1.Moisten akpụkpọ tinye a oké shaving jel.
2.Weli ogwe aka gi elu mgbe ị na - akpụ aji ka ị dọtara akpụkpọ.
3.Shave na ala elu, na-ekwe ka agụba ahụ na-efegharị n'elu anụ ahụ.
4.Zere ịkpụ ntutu n'otu ebe karịa otu oge, iji belata iwe anụ ahụ.
5.Ejiri eriri, dị ka nke Schick® ma ọ bụ Wilkinson Sword mere, nyere aka gbochie nlezianya na egbutu. Etinyela aka ike! Nanị ka agụba na njikwa rụọ ọrụ maka gị.
Zere itinye deodorant ma ọ bụ ọgwụ mgbochi mmiri ozugbo ị kpụchara afụ ọnụ, n'ihi na ime nke a nwere ike ibute iwe na nsị. Iji gbochie nke a, kpụọ ajị n’abalị ma nye ebe ahụ oge iji kwụsie ike tupu i jiri deodorant.
1.Moisten ntutu maka nkeji atọ na mmiri wee tinye gel na-akpụ ntutu. Nkwadebe a bụ ihe dị mkpa, ebe ntutu dị na mpaghara bikini na-adịwanye njọ, na-adịkarị na curlier, na-eme ka o sie ike ịkpụ.
2.Jide anụ ahụ na ebe a na-eme bikini nwayọ, ebe ọ bụ na ọ dị nro ma dịkwa nro.
3.Shave horizontally, site n'èzí na n'ime nke elu apata ụkwụ na ukwu ebe, na-eji ezigbo onye ọbụna ọrịa strok.
4.Shave ugboro ugboro kwa afọ iji mee ka ebe ahụ ghara iwe na ntutu ntutu.
Emechaa mgbe ị kpụchara afụ ọnụ: Nye ya nkeji 30 apụ gị n’ahụ
Akpụkpọ ahụ na-adịkarị nhịahụ ozugbo a kpụchara ya. Iji gbochie mbufụt, hapụ ka anụ ahụ zuru ike ma ọ dịkarịa ala minit 30 tupu:
1. Itinye mmanu mmiri, ude mmiri ma obu ogwu. Ọ bụrụ na ị ga-ete moisturiz ozugbo na-eso ntutu, họrọ usoro ude karịa ude mmiri, ma zere ịmịkọrọ mmiri na-ekpo ọkụ nke nwere ike ịnwe alpha hydroxy acids.
2. Iga mmiri. Ọkpụkpụ ajị na-eme ka ntutu dị ọhụrụ dị mfe na nsị nke chlorine na nnu nnu, yana ude mmiri nke anwụ na-acha na anwụ nke nwere mmanya.